Ukuthumela kweComWales & Returns T & C's
Siyazi ukuthi uzokuthokozela ngokuthenga kwakho kuComWales. Kodwa-ke, kungaba nezikhathi lapho uzodinga ukubuyisa izinto kithi @ Returns dept, Unit 21, The Innovation Center, EBBW VALE NP23 8XA.
Imibandela Nezimfuneko Zabathengi beComWales
Leli khasi (kanye namadokhumenti okubhekiselwe kulo) likutshela imigomo nemibandela lapho sinikeza noma yimiphi imikhiqizo (Imikhiqizo) ebhalwe kuwebhusayithi yethu ComWales.com (indawo yethu) kuwe.Izithombe ezikulesi siza Izinhloso zomfanekiso kuphela futhi into yangempela ingahluka, sicela uhlole ingxenye nezinamba ze-ean ziyilokho okudingayo ngaphambi koku-oda. Le migomo nemibandela isebenza kuphela uma uthenga njengomthengi. Abathengi bezohwebo bangaphansi kwemigomo nemibandela yokuhweba yethu engatholwa ngemibandela nemibandela yebhizinisi yeComWales
Uyacelwa ukuthi ufunde le mibandela nemibandela ngaphambi koku-oda Imikhiqizo evela kusayithi lethu. Kufanele uqonde ukuthi ngoku-oda noma imiphi imikhiqizo yethu, uyavuma ukuboshwa yile migomo nemibandela. Kufanele uprinte ikhophi lale mibandela nemibandela yesethenjwa esizayo.
Sicela ubeke uphawu ebhokisini elibhalwe ukuthi "Ngivumelana Nemigomo Nemibandela Ye-ComWales" ekugcineni kwenqubo yoku-oda uma uwamukela. Uyacelwa ukuthi uqonde ukuthi uma wenqaba ukwamukela lemigomo nemibandela, ngeke ukwazi uku-oda Imikhiqizo kusuka kusayithi lethu.
1. Imininingwane ngathi
IComWales yisiza esisebenza yiComWales Limited (we). Sibhalisiwe eNgilandi naseWales ngaphansi kwenombolo yenkampani engu-8806753 kanye nehhovisi lethu elibhalisiwe e-Capital tower Business Center, e-3rd Floor, Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AG.
2. Ukutholakala kwensiza
Isiza sethu senzelwe kuphela ukusetshenziswa ngabantu abahlala e-United Kingdom (ezweni kuphela) futhi sinelungelo lokungemukeli ama-oda avela kubantu abahlala kwenye indawo.
3. Isimo sakho
Ngokubeka i-oda kusayithi lethu, uqinisekisa ukuthi:
ukwazi ngokomthetho ukungena kwizivumelwano ezibophayo;
okungenani uneminyaka eyi-18;
uhlala e-United Kingdom (izwe kuphela); futhi
ufinyelela isiza sethu usuka e-United Kingdom (ezweni elikhulu).
4. Yenziwa kanjani inkontileka phakathi kwakho nathi
Ngemuva kokufaka i-oda, uzothola i-imeyili evela kithi evuma ukuthi sithole i-oda lakho. Uyacelwa uqaphele ukuthi lokhu akusho ukuthi i-oda lakho lamukelwe. I-oda lakho linikeza umnikelo kithi wokuthenga umkhiqizo. Yonke imiyalo ingaphansi kokwemukelwa yithi, futhi sizokuqinisekisa ukwamukela okunjalo kuwe ngokukuthumelela i-imeyili eqinisekisa ukuthi semukele i-oda lakho (isiqinisekiso sokuvuma) inkontileka phakathi kwethu (Inkontileka) izokwakhiwa kuphela lapho thina thumela wena isiqinisekiso sokwemukela.
Isivumelwano sizovumelana kuphela naleyomikhiqizo esiyiqinisekisile Kwisiqinisekiso Sokwamukela. Ngeke siphoqeleke ukuthi sinikeze eminye imikhiqizo okungenzeka ukuthi yayiyingxenye ye-oda yakho kuze kube lapho kwemukelwa leyo Mikhiqizo kuqinisekisiwe kusiqinisekiso sokwamukela okuhlukile.
Noma imiphi imidwebo, izithombe, izincazelo noma ukukhangisa esikukhipha, futhi noma yiziphi izithombe, izincazelo noma imifanekiso equkethwe esizeni sethu, ziyakhishwa noma zishicilelwe kuphela ukukunikeza umbono olinganiselayo weMikhiqizo abayichazayo. Akuyona ingxenye yesivumelwano phakathi kwakho nathi noma yisiphi esinye isivumelwano phakathi kwakho nokusebenzisa ukuthengisa iMikhiqizo.
5. Amalungelo abasebenzisi
Uma unenkontileka njengomthengi, ungahle ukhansele inkontileka eku-inthanethi nganoma yisiphi isikhathi kungakapheli izinsuku eziyishumi nane, uqale ngosuku ngemuva kokuthola iMikhiqizo. Kulokhu, uzothola ukubuyiselwa okuphelele kwenani elikhokhelwe Imikhiqizo ngokuya ngenqubomgomo yethu yembuyiselo (ebekwe kwisigaba 9 ngezansi). Amakhasimende athengisa akakwazi ukukhansela ukuthengisa uma izimpahla sezikhokhelwe bese eshiya esitolo. Amalungelo akho asemthethweni asebenza eNgilandi naseWales.
Ukukhansela isivumelwano, kufanele usazise ngokubhala. Kufanele ubuyisele uMkhiqizo (kithi) kithi ngokushesha futhi kufanele zitholwe zingakapheli izinsuku eziyi-14 zokukhanselwa ekhelini elibuyayo ngenhla, ngesimo esifanayo owathole ngaso, nangezindleko zakho nangengozi yakho. Unesibopho esingokomthetho sokunakekela ngokunakekela iMikhiqizo ngenkathi inakho. Uma wehluleka ukuhambisana nalesi sibopho, singaba nelungelo lokusebenza kuwe lokukuthola isinxephezelo ngokunciphisa imali yakho noma ukwenqaba ukukhishwa kwe-yoru.
Ngeke ube nelungelo lokukhansela isivumelwano sokuhlinzekwa kwemikhiqizo elandelayo:
Umculo, isoftware yekhompiyutha, izinto zokukhiqiza ukudla, amacici noma izinto zezempilo nobuhle njengemisebe noma izinto ezibomvana ezingeke zathengiswa kabusha ngenhlanzeko okuye kwavulwa futhi kwathengiswa izinto ezisetshenzisiwe; futhi
izimpahla ezingadliwayo ngaphandle kokuthi kutholwe iphutha lapho bekungeke kukhonjwe khona ngaphandle kokuvula Imikhiqizo.
Imininingwane yaleli lungelo elisemthethweni, kanye nencazelo yokuthi ulisebenzisa kanjani, inikezwe ekuqinisekisweni kokuvuma. Lokhu kunikezwa akuthinti amalungelo akho asemthethweni.
Uma ungathanda imininingwane eyengeziwe mayelana namalungelo akho asemthethweni, sicela uthintane noMnyango wakho Wezinga Lokuhweba noma Citizen Advice Bureau.
6. Ukutholakala nokulethwa
I-oda lakho lizofezeka ngosuku lokulethwa olubekwe kusiqinisekiso sokuvuma noma, uma lungekho usuku lokulethwa oluchaziwe, isilinganiso sethu yizinsuku zokusebenza eziyi-3-5 kusukela ngosuku lwe-oda lokwamukelwa kokuvuma, ngaphandle kokuthi kunezimo ezihlukile. Ama-ejenti ethu wokuthumela yiRoyal Mail, i-UKMail, i-DPD ne-TNT, imininingwane yokulandela umkhondo izonikezwa lapho zitholwa esitolo. I-UKMail ne-DPD zingalandelelwa kumawebhusayithi abo, izinombolo zamadijithi ayi-5 zingalandelelwa yiwebhusayithi ye-TNT. Noma iyiphi enye indlela kune-Royal Mail ethathwa njengesivumelwano sokuthumela futhi ayibuyiswa ngaphandle kokuthi kulimale noma kulahlekelwe.
Izinsuku zokulethwa (uma zikhona) ezinikezwe yiNkampani zinikezwa ngokweqiniso ukukhombisa izikhathi zokulethwa kodwa ngeke zifinyelele kunoma yisiphi isibopho senkontileka yokuletha ngezikhathi ezishiwo. Inkampani ngeke ibe nesibopho sokulahlekelwa okubandakanya (kepha kungakhawulelwa) ekulahlekelweni kwenzuzo, izindleko, izindleko, izindleko noma izindleko ezidalwe ngokuqondile noma ngokungaqondile ekulethweni kokulethwa Kwezimpahla (noma kubangelwa ukunganaki kweNkampani) noma ngaphandle kokuthi noma yikuphi ukubambezeleka kudlule izinsuku ezingama-180 lokho kubambezeleka kuzonika amandla uMthengi ukuthi aqede noma asuse inkontileka. Ukuthembela kuzokwenziwa ekhelini elishiwo nge-oda lakho. Uma ufisa ukwenqaba noma ukuguqula ikheli lokulethwa ngemuva kokuthi i-oda lakho selithunyelwe kithi, inkokhelo ye- £ 10 izokwenziwa ngumenzeli wokuthumela (imvume yokuqondisa kabusha ingaphansi kwe-oda lakho nesimo se-akhawunti yakho). Inkontileka yenkokhelo yokuthumela isazosebenza ngaphandle kwezindleko zeposi lasebukhosini.
Ama-oda afakwe ngaphambi kwesikhathi esinqunyiwe azocutshungulwa ngosuku olufanayo futhi azothunyelwa ngokuhambisana nesicelo sakho sokulethwa okuhlinzekwa amasheke wokuphepha awadingeki futhi nayo yonke iMikhiqizo iyatholakala.
Ngeke kuvezwe noma kususwe okuhle esitolo noma esigcekeni kuze kube kutholile imali ebonakalayo. Uma umthengi ehluleka ukuletha noma yiziphi izimpahla lapho zikulungele ukulethwa, noma ehluleka ukuhlinzeka ngeminye imiyalo noma ukugunyazwa okudingekayo ukuze Izimpahla zilethwe ngesikhathi Izimpahla kuzothathwa ukuthi zidilivwe futhi (ngaphandle kokubandlulula amanye amalungelo alo) Inkampani: -
gcina Izimpahla kuze kufike ukulethwa kwangempela noma ukuthengiswa bese ukhokhisa umthengi ngazo zonke izindleko nezindleko ezihlobene (kufaka, ngaphandle komkhawulo, isitoreji nomshuwalense); futhi / noma - isaziso esibhalwe phansi esithengwa uMthengi, uthengise noma yiziphi izinto Zentengo ngentengo engcono kakhulu etholakala ezimweni bese ukhokhisa umthengi nganoma yikuphi ukusweleka okungaphansi kwentengo okuvunyelwene ngayo nomthengi.
Uyacelwa uqaphele ukuthi uma into iqoqwa noma ilethwa yisevisi yethu yenethiwekhi ye-DPD futhi ukuqoqwa noma ukulethwa kulahlekile noma kwehluleka kuzoba nemali ekhokhwayo ye- $ 10 ethathwe kwimbuyiselo yakho.
Yehlulekile Ukukhokhiswa KwePallet. Uma ukulethwa kwakho kwehluleka ngenxa yokuthi akekho umuntu osepulazini ngalolo suku eseluleke ngalo, uma ukulethwa kunqatshiwe noma uma ukhansele i-oda ngemuva kokuba kuthunyelwe kuzoba nemali yokulethwa eyehlulekile edonswa kwimbuyiselo yakho. Le mali ingafinyelela ku- £ 100.00.
Ukukhokhiswa Kwe-Pallet Revenue. Uma sizama ukulethwa kwakho ngosuku lokuhlelela okuhleliwe okuqoqiwe futhi akekho umuntu ekhaya kuzokhokhelwa imali yokulethwa kabusha. Le mali ingafinyelela ku- £ 100.00. Sizobuyisa kuphela uma usuqinisekisile ukuthi ujabule ngokukhokhiswa.
7. Ingozi nesihloko
Imikhiqizo izoba sengozini yakho kusukela ngesikhathi sokulethwa noma sokukhishwa esitolo sethu.
Ubunikazi / isihloko soMkhiqizo sizodlulela kuwe kuphela lapho sithola inkokhelo ephelele yazo zonke izibalo okumele zikhokhwe bese kuthi okungenani izinsuku ezingama-180 zidluliselwe ukukhokha kwamakhadi noma okukhokhelwayo maqondana neMikhiqizo, kufaka phakathi ukulethwa kanye nezinye izindleko ezingekho.
8. Intengo nokukhokha
Intengo yanoma yimiphi Imikhiqizo izocashunwa kusayithi lethu ngezikhathi ezithile, ngaphandle kokuthi ezimweni zephutha elisobala.
Lawa amanani afaka i-VAT kepha awafaki izindleko zokulethwa, ezizongezwa kwisamba esiphelele njengoba kubekiwe kuLwazi Lwethu Lokulethwa
Amanani anesibopho sokushintsha nganoma yisiphi isikhathi, kepha izinguquko ngeke zithinte ama-oda maqondana nalokho esivele sikuthumelele lona Isiqinisekiso Sokwamukela.
Isayithi lethu liqukethe inani elikhulu lemikhiqizo futhi kungenzeka njalo ukuthi, ngaphandle kwemizamo yethu emihle, eminye imikhiqizo eboniswe kusayithi lethu ingahle ithengwe ngokungafanele. Sizoqinisekisa amanani entengo njengengxenye yezinqubo zethu zokuthumela ukuze, lapho intengo eyiyo yoMkhiqizo ingaphansi kwentengo yethu eshiwo, sizokhokhisa inani eliphansi lapho sithumela uMkhiqizo kuwe. Uma intengo efanele yoMkhiqizo ingaphezulu kunenani elishiwo esizeni sethu, ngokujwayelekile, ngokubona kwethu, singakuthinta ukuthola imiyalo ngaphambi kokuthumela uMkhiqizo, noma senqabe i-oda lakho futhi sikwazise ngokwenqatshelwa okunjalo.
Asibophekile ukukunikeza uMkhiqizo kuwe ngentengo engeyona (ephansi), noma ngabe sikuthumelele i-Confidence Confirmation, uma iphutha lamanani entengo lisobala futhi lingathandeki futhi kungenzeka waqashelwa nguwe njengengamanani entengo engafanele .
Ukukhokhelwa kwayo yonke imikhiqizo kumele kube ngekhadi lesikweletu noma lebhange. Samukela ukukhokha ngeVisa, i-Visa Electron, i-Mastercard, iMaestro, iSolo. Ngeke sithumele eminye imikhiqizo kuze kube yilapho sithola imali esele. Akukho ukukhokha okuzothathwa njengokutholwe kuze kube yilapho sithole imali esetshenzisiwe. Sicela wazi ukuthi uma usebenzisa i-PayPal noma ikhadi njengendlela yakho yokukhokha, sinelungelo lokungahanjiswa kumakheli angaqinisekiswanga / akhokhwayo. Izingxabano zokukhokha noma imali ekhokhwayo ephakanyiswe yephula lesi sivumelwano izokhokhiswa imali engu- $ 20 / € 22 futhi noma yiziphi izinzalo ezihlobene, imali yezomthetho neyokubuyisa yemali esele.
Imininingwane yekhadi lakho lesikweletu / lasebhange izobhalwa nathi ukuze sinciphise amathuba okufinyelela noma okungekho emthethweni okungagunyaziwe. Igunya lokukhokha kumele linikezwe ngesikhathi soku-oda. Uma kunenkinga ukuthatha inkokhelo yakho konke noma ingxenye ye-oda lakho, singathinta wena ngocingo noma nge-imeyili. Sizokukhokhisa imali yokuphatha engu- £ 5 isikhathi ngasinye lapho ibhange lakho lingakwazi ukucubungula inkokhelo yakho.
9. Inqubomgomo yethu yokubuyiselwa kwemali
Uma ubuyisela uMkhiqizo kithi:
Uma ngenxa yokuthi ukhansele isivumelwano phakathi kwethu phakathi nesikhathi sokupholisa sezinsuku eziyishumi nane (bheka isigatshana 5.1 ngaphezulu), sizocubungula ukubuyiselwa kwemali ngenxa yakho ngokushesha okukhulu futhi, noma kunjalo, kungakapheli izinsuku ezingama-30 kosuku onalo unikezwe isaziso sokukhanselwa kwakho. Kulokhu, sizobuyisela inani lentengo yoMkhiqizo ngokugcwele, kufaka phakathi izindleko zokuthumela leyo nto kuwe uma ithunyelwe. Kodwa-ke, uzoba nesibopho sezindleko zokubuyisela into kithi. Sincoma ukuthi zonke izinto zibuyiswe ngendlela yokurekhoda okurekhodiwe, ngoba ngeke sikhokhelwe yimuphi umonakalo noma ukulahleka ngenkathi kuhamba;
nganoma yisiphi esinye isizathu (ngokwesibonelo, ngoba usazisile ngokuya ngesigatshana 21 ukuthi awuvumi ukushintshwa kule migomo nemibandela noma ezinye izinqubomgomo zethu, noma ngoba uthi uMkhiqizo awunaphutha), thina sizocubungula uMkhiqizo obuyiselwe futhi uma kufanele, sizokwazisa ngezinhloso zethu zokulungisa, ukufaka noma ukufaka imali nge-imeyili kungakapheli isikhathi esifanele. Ngokuvamile sizocubungula ukulungiswa kwakho, ukufaka esikhundleni noma ukubuyiselwa kwemali ngokushesha futhi, noma kunjalo, kungakapheli izinsuku ezingama-30 kokuthola uMkhiqizo onephutha. Uma ukhetha ukubuyiselwa kwemali koMkhiqizo okubuyiswe nguwe ngenxa yesiphene kuzobuyiselwa imali njengenqubomgomo yethu yokubuyiselwa kwemali, kufaka phakathi ukubuyiselwa kwengxenye yenkokhelo yokulethwa ehlobene nalowo Mkhiqizo onephutha yokuthumela into kuwe kanye nezindleko kungenwe ngokubuyisa uMkhiqizo onephutha kithi. Uma unemvume yokulungisa noma ukufaka omunye uMkhiqizo ongcolile ngeke sikukhokhise ukuthola kabusha uMkhiqizo olungiwe noma owenziwe omunye esikhundleni sawo.
Uma ukhetha ukubuyisa uMkhiqizo onephutha kithi usebenzisa indlela yakho yokulethwa, sizobuyisela imali engafika ku- $ 4.00 yezindleko ezenziwe nguwe. Lokhu kuzobuyiselwa kuphela lapho sekutholwe ubufakazi bezindleko zokuhamba.
Noma imiphi i-oda elingaphezu kwezinyanga eziyi-6 ubudala futhi uMkhiqizo uqinisekisiwe ukuthi unephutha futhi imbuyiselo iyakhokhwa, imali ebuyiswayo izobalwa ngokuya ngeminyaka ye-oda futhi uzobuyiselwa inani elilinganayo lentengo yasekuqaleni yokuthenga Umkhiqizo. Lokhu akubandakanyi izindleko zokuhamba ze-oda langempela ezingeke zabuyiselwa.
Ukubuyiselwa kwemali oyitholile kusuka kuwe kuzokwenziwa kusetshenziswa ikhadi elifanayo elalisetshenziswa nguwe ukukhokhela ukuthenga kwakho bese kubuyiselwa ku-akhawunti efanayo.
Ukubuyisa umkhiqizo nganoma yisiphi esinye isizathu, bona inqubomgomo yethu yokubuyisa
10. Isikweletu sethu
Sigunyaza kuwe ukuthi noma yimuphi uMkhiqizo othengwe kithi ngokusebenzisa isiza sethu uyikhwalithi egculisayo futhi kufanelekile kuzo zonke izinhloso lapho imikhiqizo yalolo hlobo ihlinzekwa njalo. Le waranti ayisebenzi kunoma yisiphi isici eMkhiqizweni ovela ekugqokeni kahle nasekudabukeni, ukulimala ngamabomu, ingozi, ukunganaki nguwe noma omunye umuntu wesithathu, uma usebenzisa uMkhiqizo ngendlela esingayincomi, ukwehluleka kwakho ukulandela imiyalo , noma yikuphi ukuguqulwa noma ukulungiswa okwenzayo ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini.
Uyemukela ukuthi noma yimiphi imikhiqizo ethengiwe ebhalwe njengebanga A, ibanga B, imikhiqizo yokubukisa noma istoko esisetshenzisiwe (okusho ukuthi kungenzeka ukuthi inesici esincane sezimonyo, ibe yinto evuselelwa kabusha efektri noma kungenzeka ukuthi ngaphambili yathunyelwa futhi yathunyelwa njengento engafuneki into) ube nesiqinisekiso sezinsuku ezingama-90 sebanga A nokubekwa kwangaphambilini kanye nezinsuku ezingama-30 zebanga B. Lapho imikhiqizo inebanga A, ebangeni B, isibonisi sangaphambilini noma esisetshenzisiwe esitokisini kuzophawulwa encazelweni Yomkhiqizo esizeni.
Isikweletu sethu sokulahlekelwa ohlupheka ngenxa yethu wephula lesi sivumelwano sikhawulelwe kuphela kumanani wokuthenga koMkhiqizo owuthengile.
Lokhu akubandakanyi noma kukhawulele nganoma iyiphi indlela isikweletu sethu:
ngokufa noma ukulimala komuntu okubangelwa ukunganaki kwethu;
ngaphansi kwesigaba 2 (3) soMthetho Wokuvikelwa Komthengi we-1987;
ubuqhetseba noma ukukhwabanisa okungafanele;
nganoma yikuphi ukwephulwa ngamabomu kwale Migomo okungakunikeza ilungelo lokuqeda isivumelwano phakathi kwethu; noma
yanoma yiluphi udaba okungaba akukho emthethweni ngathi ukuthi singafaki eceleni, noma sizame ukukususa ngaphandle, isikweletu sethu.
Asinacala kunoma yikuphi ukulahleka okungaqondile noma okuphumela eceleni okwenzeka njengomphumela wecala lokulahleka okukhulu noma ukulimala futhi noma ngabe lokho kulahleka kubangelwa ukwephula ngamabomu kwalesi Sivumelwano okungakuvumela ukuthi unqume isivumelwano phakathi kwethu, kufaka phakathi kepha kungagcini ku:
ukulahleka kwemali engenayo noma imali engenayo;
ukulahleka kwenzuzo noma izinkontileka;
ukulahleka kwemali obekulindelwe kuyo;
ukulahleka kwedatha, noma
imfucuza yokuphatha noma isikhathi sehhovisi kepha kuvuka nokuthi kubangelwa ukuhlukunyezwa (kufaka phakathi ukunganaki), ukwephula isivumelwano noma okunye, noma kungabonakala, uma nje lesi sigatshana se-10.5 ngeke sivikele izicelo zokulahleka noma kokulimala kwempahla yakho ebonakalayo ewela ngaphakathi ngokwemibandela yomshwana we-10.1 noma umushwana we-10.2 noma ezinye izimangalo zokulahleka kwezezimali okuqondile ezingafakwanga yimiphi imigatshana ye-10.5.1 kuye ku-10.5.6 ehlanganisa lo mshwana we-10.5.
I-11. Ukuvikelwa Kwedatha
Ngaphandle kokuthi kubekwe ngokusobala kule migomo nemibandela, konke ukusetshenziswa kwemininingwane yakho yangasese kuzokwenziwa ngokuya ngenqubomgomo yethu yobumfihlo https://comwales.co.uk/privacy-and-cookies/ I-GDPR noma eminye imithetho nayo iyasebenza. Idatha yakho izogcinwa futhi isetshenziselwe izinhloso zomthetho nezezezimali iminyaka efinyelela kwengu-7 bese ichithwa ngokuphepha.
Ngokuphepha kwakho, lapho u-oda kithi sisebenzisa ubuchwepheshe be-Secure Socket Layer 3 (SSL3) kuphela, ukuqinisekisa ukuthi awukwazi ukubeka i-oda ungahlosile ngoxhumano olungavikelekile.
Ngokubhalisa eminye imininingwane yakho nathi, uyavuma ukusivumela ukuxhumana nathi maqondana nemikhiqizo noma izinsizakalo zethu. Singadlulisela imininingwane yakho komunye umuntu ngaphandle kokuthi ukhonjiswe ngenye indlela nguwe.
12. Ukuvikela ukuvikeleka kwakho
Ukuqinisekisa ukuthi ikhadi lakho lesikweletu, lebhange noma lekhokhiso alisetshenziswa ngaphandle kwemvume yakho, sizofakazela igama, ikheli kanye nolunye ulwazi lomuntu siqu olunikezwe nguwe ngesikhathi senqubo yoku-oda ngokuhambisana nemininingwane yolwazi lomuntu wesithathu.
Ngokwamukela le migomo nemibandela uyavuma ukuthi lokho kuhlolwa kwenziwe. Ekwenzeni lokhu kuhlola imininingwane yomuntu enikezwe nguwe kungadalulwa kwi-Rejista Yezikweletu Ebhalisiwe engagcina irekhodi lalolo lwazi. Ungaqiniseka ukuthi lokhu kwenziwa kuphela ukuqinisekisa ubunikazi bakho, ukuthi isheke lesikweletu alikwenziwa nokuthi isilinganiso sakho sesikweletu ngeke sitholakale. Yonke imininingwane enikezwe nguwe izophathwa ngokuphepha nangokuqinile ngokuya nge-Data Protection Act 1998 ne-GDPR.
Ngesikhathi sokuhlolwa kwezokuphepha singacela imininingwane eyengeziwe noma imibhalo ukusiza ukuxhasa imininingwane oyinikezile.
13. Ngenisa umsebenzi
Uma u-oda Imikhiqizo kusuka kusayithi lethu ukulethwa ngaphandle kwe-UK, ingahle ibe ngaphansi kwempahla yokuthekelisa / yokungenisa kanye nentela ekhokhwayo lapho ukulethwa kufinyelela lapho kuchazwe khona Uzoba nesibopho sokukhokha yanoma iyiphi imisebenzi yokungenisa kanye nentela. Uyacelwa uqaphele ukuthi asinamandla okukhokhela lezi zindleko futhi asikwazi ukubikezela inani lazo. Sicela uxhumane nehhovisi lasekhaya lasekhaya ukuthola eminye imininingwane ngaphambi kokufaka i-oda lakho.
Kufanele uhambisane nayo yonke imithetho nezimfuneko ezisebenzayo zezwe lapho iMikhiqizo ihliselwe khona. Ngeke sithweswe icala nganoma yikuphi ukwephulwa kwakho kweminye imithetho enjalo.
14. Ezokuxhumana ezibhaliwe
Imithetho esetshenziswayo idinga ukuthi eminye imininingwane noma ukuxhumana esikuthumela kona kufanele kube kubhalwa phansi. Uma usebenzisa isiza sethu, wamukela ukuthi ukuxhumana nathi kuzoba nge-elekthronikhi ikakhulukazi. Sizokuthinta nge-imeyili noma sikunikeze imininingwane ngokuthumela izaziso kuwebhusayithi yethu. Ngezinhloso zenkontileka, uyavumelana nalezi zindlela zokuxhumana ze-elekhtronikhi futhi uyavuma ukuthi zonke izinkontileka, izaziso, imininingwane kanye nezinye izinto zokuxhumana esikunikeza zona nge-elekthronikhi nganoma iyiphi imfuneko yezomthetho ebhalwe phansi leyo mibhalo. Lesi simo asithinti amalungelo akho asemthethweni.
Zonke izaziso osinikeze zona kufanele zinikezwe iComWales, iMarket Street, iPontypridd, i-RCT Wales CF37 2ST. Singakunikeza isaziso noma nge-imeyili noma ekhelini leposi osinikeza lona lapho ufaka i-oda, noma nganoma yiziphi izindlela ezichazwe esigatshaneni 13 ngenhla. Isaziso sizothathwa ngokuthi sitholwe futhi sisebenze kahle lapho sithunyelwa kuwebhusayithi yethu, amahora angama-24 ngemuva kokuba kuthunyelwe i-imeyili, noma ezinsukwini ezintathu ngemuva kosuku lokuthumela noma iyiphi incwadi. Ekufakazeni insizakalo yanoma isiphi isaziso, kuzokwanela ukufakazela, esimweni sencwadi, ukuthi leyo ncwadi yaqondiswa ngokufanele, yafakwa isitembu futhi yabekwa eposini futhi, esimweni se-imeyili, ukuthi imeyili yathunyelwa kukheli elichaziwe le-imeyili lesengezo.
16. Ukudluliselwa kwamalungelo nezibopho
Isivumelwano phakathi kwakho nathi sibopha wena nakithi nakwabalandelanayo nababelayo.
Awungeke udlulise, unike, ukhokhise noma uchithe ngenye indlela inkontileka, noma amanye amalungelo akho noma izibopho zakho ezivela ngaphansi kwayo, ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini.
Singadlulisa, sinikeze, sikhokhise, sisayine inkontileka noma sisebenzise enye indlela inkontileka, noma amanye amalungelo ethu noma izibopho zethu ezivela ngaphansi kwayo, nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sesivumelwano.
17. Imicimbi engaphandle kolawulo lwethu
Ngeke sibe nesikweletu noma sibhekane nanoma yikuphi ukwehluleka ukwenza, noma ukubambezela ukusebenza, noma yisiphi isibopho sethu ngaphansi kweSivumelwano esibangelwa yimicimbi engaphandle kolawulo lwethu olufanele (Force Majeure Izinkundla).
iziteleka, ukukhiya noma okunye okwenziwa yizimboni;
isiyaluyalu somphakathi, udlame, ukuhlasela, ukuhlasela kwamaphekula noma usongo lokuhlasela kwamaphekula, impi (noma ngabe imenyezelwe noma cha) noma ukusongela noma ukulungiselela impi;
umlilo, ukuqhuma, isivunguvungu, uzamcolo, ukuzamazama komhlaba, ukuzilolonga, ubhubhane, ubhubhane noma enye inhlekelele yemvelo;
ukungabi khona kokusetshenziswa kojantshi, ukuhambisa, izindiza, ukuthutha izimoto noma ezinye izindlela zokuhamba zomphakathi noma ezizimele;
ukungabi khona kokusetshenziswa kwamanethiwekhi omphakathi noma ngasese ezokuxhumana;
izinto, izinqumo, imithetho, imitheshwana noma imikhawulo yanoma yimuphi uhulumeni.
Ukusebenza kwethu ngaphansi kwanoma iyiphi inkontileka kuthathwa njengokumisiwe okwesikhashana lapho umcimbi we-Force Majeure uqhubeka khona, futhi sizoba nesikhathi esengeziwe sokwenza isikhathi sonke saleso sikhathi. Sizosebenzisa imizamo yethu efanelekile ukuze sisondele emcimbini we-Force Majeure noma sithole isisombululo lapho izibopho zethu ezingaphansi kweNkontileka zingenziwa khona yize kukhona uMkhosi we-Ma Maureure.
Uma sehluleka, nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi seNkontileka, sokugcizelela ukusebenza okuqinile kwanoma yiziphi izibopho zakho ngaphansi kweNkontileka noma enye yale migomo nemibandela, noma uma sehluleka ukusebenzisa noma imaphi amalungelo noma amakhambi esivunyelwe kuwo abanamalungelo ngaphansi kweNkontileka, lokhu ngeke kwakhahlukanise amalungelo noma leyo makhambi futhi ngeke kukunciphise ekuthobeleni izibopho ezinjalo.
Okwemukelwa yithi kokunye okuzenzakalelayo ngeke kwakha ukuvela kokuzenzakalelayo okulandelayo.
Akukho okushixwa yithi nganoma yimiphi yale migomo nemibandela ezosebenza ngaphandle kokuthi kuchazwe ngokucacile ukuthi kungukunqunyelwa futhi kudluliselwe kuwe ngokubhala ngokuhambisana nesigatshana 14 ngenhla.
Uma noma yimiphi yale mibandela nemibandela noma noma yiziphi izinhlinzeko zeNkontileka enqunywa yiliphi igunya elivumelekile ukuthi zingasebenzi, azikho emthethweni noma azithinteki ngokwezinga elithile, lelo gama, umbandela noma ukuhlinzekwa ngaleyo ndlela kuzodedelwa kule migomo esele, imigomo nezinhlinzeko okuzoqhubeka nokusebenza ngezinga eligcwele elivunyelwe ngumthetho.
20. Isivumelwano sonke
Sihlose ukuthembela kule migomo nemibandela kanye nanoma yimuphi umbhalo okubhekiswe kuwo ngokuqondile maqondana nendaba yanoma yisiphi isivumelwano. Ngenkathi samukela umthwalo wemfanelo wezitatimende kanye nezethulo ezenziwa ngabamele bethu abagunyazwe ngokufanele, sicela uqinisekise ukuthi ucela noma ikuphi ukuhlukahluka kule migomo nemibandela ukuze kuqinisekiswe ngokubhala.
21. Ilungelo lethu lokuhluka lemibandela
Sinelungelo lokubuyekeza nokuchibiyela le migomo nemibandela ngezikhathi ezithile ukukhombisa ushintsho ezimeni zezimakethe ezithinta ibhizinisi lethu, izinguquko kubuchwepheshe, izinguquko ezindleleni zokukhokha, izinguquko emithethweni efanele nezidingo zokulawula nezinguquko emandleni ohlelo lwethu.
Uzoba ngaphansi kwezinqubomgomo nemigomo nemibandela esebenza ngaleso sikhathi lapho u-oda imikhiqizo evela kithi, ngaphandle kokuthi uma kukhona ushintsho kulezo zinqubomgomo noma le migomo nemibandela kudingeka ukuthi lwenziwe ngumthetho noma ngeziphathimandla zikahulumeni (lapho kuzokwenzeka khona sebenza kuma-oda abekwe nguwe ngaphambili), noma uma sikwazisa ngoshintsho kulezo zinqubomgomo noma lemibandela nemibandela ngaphambi kokuthi sikuthumele isiqinisekiso sokuvuma (lapho sinelungelo lokucabanga ukuthi wamukele ushintsho imigomo nemibandela, ngaphandle kokuthi usazise okuphambene kungakapheli izinsuku eziyisikhombisa zokusebenza ukutholwa Imikhiqizo).
22. Umthetho nokulawulwa
Izinkontileka zokuthengwa kwemikhiqizo esizeni sethu nanoma iyiphi impikiswano noma isimangalo esivela ngaphandle noma ukuxhumana nabo noma udaba lwabo noma ukwakheka (kufaka phakathi izingxabano noma izimangalo ezingezona zesivumelwano) zizolawulwa ngumthetho wamaNgisi. Noma iyiphi impikiswano noma isimangalo esivela ngaphandle noma esiphathelene nalezi zinkontileka noma ukwakheka kwazo (kufaka phakathi izingxabano noma izimangalo ezingezona zenkontileka) zizoya ngaphansi komthetho wezinkantolo zaseNgilandi naseWales ezingakhethi.
I-ComWales, isikhungo sebhizinisi i-Capital Tower Business Centre, 3rd Floor, Capital tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AG
Uma ungazitholanga izinto zakho kufanele usazise zingakapheli izinsuku eziyi-7 ukusuka ngosuku lokulinganisa noma usuku lokuthumela langempela. Uma sesazi ukuthi awuyitholi into yakho sizophenya ngalolo daba ngaphakathi nangabathwali bethu. Ngeshwa asikwazi ukuphenya ukulethwa okungatholakali ngemuva kokuthi lesi sikhathi sesidlulile.
Iyabuya isebenzisa indlela yakho yokulethwa
Yizinto ezinephutha kuphela ezinikezwa kungakapheli izinsuku eziyi-14. Uma ukhetha ukubuyisa umkhiqizo onephutha kithi usebenzisa indlela yakho yokulethwa, sizobuyisela imali engafika ku- $ 4.00 yezindleko ezenziwe nguwe. Lokhu kuzobuyiselwa kuphela lapho sekutholwe ubufakazi bezindleko zokuhamba. Ngeke sikhokhe noma sibuyisele noma yiziphi imali yokuthumela uma nje uguqula ingqondo yakho ngokuthenga kwakho.
Izinto Ezonakalisiwe Kuhambo
Uma kukhona izinto ezonakele ekuhambeni, sicela ukuthi usibikele kungakapheli amahora angama-24 (sicela uqaphele ukuthi lokhu kungamahora ayi-12 kumakhasimende ethu ebhizinisi). Uma izinto zilinyazwa ngokubonakalayo kwirisidi, kungcono ukusayina inothi lokuthumela yomthwali ngokufanele. Izinto kufanele zibuyiselwe ekuhlanganisweni kwazo kwasekuqaleni kuqediwe nazo zonke izesekeli nemibhalo. Uma sesiphinde sabuyelwa endlini yethu yokubekisa, sizokhipha okunye okubuyiselwe esikhundleni noma indlela ebuyiselwa ngokuphelele kuwe ngokusebenzisa indlela yakho yangempela yokukhokha bese sikubuyisela izindleko zakho zokubuyisa ezitholakalayo ezibiza nge- £ 4 uma ungasebenzisi ilebula yethu engenayo.
Izinto Ziyahluleka Kokufika
Uma izinto zakho zinephutha ekufikeni, unezinsuku zekhalenda ezingama-28 zokusazisa ngephutha (sicela wazi ukuthi kumakhasimende ethu ebhizinisi, lezi yizinsuku zekhalenda eziyi-14). Izinto kufanele zibuyiselwe ekuhlanganisweni kwazo kwasekuqaleni kuqediwe nazo zonke izesekeli nemibhalo. Uma nje sesiliqinisekisile iphutha, sizokhipha okukubuyisela esikhundleni noma okukubuyisela ngokugcwele imali ngendlela yakho yangempela yenkokhelo bese sibuyisela izindleko zakho zokubuyisa okufanelekile. Sivivinya izinto ezibuyisiwe, futhi uma into ebuyiselwe itholakala ingenaphutha ngochwepheshe bethu sizoyibuyisela leyo nto, kulesisimo uzokhokha imithwalo yempahla ebuyayo.
Izinto Zizehluleka Esikhathini Sewaranti
Uma noma yikuphi okuthengile kwakho kuba nephutha, futhi kungaphezu kwezinsuku ezingama-28 zekhalenda selitholile, uma nje into yakho ingaphakathi kwesikhathi sayo sesiqinisekiso, unelungelo lokulungiswa kwewaranti. Kwezinye izimo, abakhiqizi bahlinzeka ngochwepheshe abasebenza ngokugcwele esizeni kanye / noma kwizikhungo zosizo ngocingo ukuze kube lula kuwe esikuncoma ukuthi usebenzise ukuze ulungise iphutha ngokushesha. Kumakhasimende ebhizinisi konke okulungiswa kwewaranti ngemuva kwezinsuku ezingama-28 zokuthola kuthunyelwe ngqo kumenzi (ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela)
Izinto ze-Open-Box / Ex-Display
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi isitokisi sethu esivulekile sebhokisi / i-ex-ukubonisa sidayiswa kuphela ngewaranti yezinsuku zekhalenda ezingama-90, ngakho-ke noma yiziphi izimangalo ezingaphansi kwewaranti ngemuva kwezinsuku ezingama-90 zokuthola ngeke zamukelwe.
Uma ushintsha umqondo wakho
Amakhasimende asheshayo angeke akhansele uma into ikhokhelwe, isusiwe futhi isetshenziswa. Ku-inthanethi Uma usuvele ushintshe umqondo wakho nganoma iyiphi into e-odawe futhi ufisa ukuyibuyisela, khona-ke ngokuhambisana Nemibandela Yokuthengisa Okubanga (inkontileka yomthengi) ungakwenza lokho uma nje ungasazisa ngesinqumo sakho zingakapheli izinsuku eziyi-14 ukutholile.
Into leyo akumele isetshenziswe futhi kumele ibe 'yintsha' lapho ibuyiselwa kithi, noma imali ekhokhiswayo ingabizwa. Uma usazisile ukuthi ufisa ukubuyisa izimpahla ngaphansi kwe-DSR, unezinsuku zekhalenda eziyi-14 zokwenza njalo, ngezindleko zakho. Lapho into isitholile kuComWales, sizokhipha imali ephelele yomkhiqizo indlela yakho yokukhokha yasekuqaleni kanye neposiwe uma kuthunyelwe. Izinkontileka zokuthumela azibuyiselwa. Uyacelwa uqaphele ukuthi le nqubomgomo inemikhawulo ethile futhi ayisebenzi kumakhasimende webhizinisi. (Imigomo Yokuthengisa Okude ayisebenzi ekuthengeni okwenziwe esitolo noma kumakhasimende we- @work noma kumakhasimende webhizinisi lethu iB2B) Izinto ezingaphandle kwe-DSR noma ezilimele / ezingahambelani zinganqatshelwa futhi sibuyisele emuva ilungelo lethu lokunikeza imbuyiselo ngokuya nge-restocking @ 30% Imali uma ikhona futhi inikelwe. Amakhasimende athengiswayo awanalungelo lokushintshwa kwengqondo ebuyiselwe imali ngaphandle kokuthi savuma kusengaphambili njengoba singathengisi izimpahla ngesivivinyo.
Udinga ukubuyisa into?
Ungacela ukubuyiselwa usebenzisa uhlelo lwethu olulula ukusebenzisa, oluku-inthanethi olutholakala nge-akhawunti yakho. Ngenye indlela thumela into yakho ekhelini elingenhla nemininingwane ye-oda lakho nesizathu sokubuyela noma ungene esitolo ukuze uxoxe ngodaba lwakho.
Ngokwengeziwe kule nqubomgomo kufanele futhi ubheke Imibandela nemibandela Yokuthengisa ye-B2C ejwayelekile.
Iyini indinganiso ye-ISO 13406-2 yamaphutha wephikiseli we-LCD?
Yonke imibukiso ye-LCD ethengiswa eComWales inamathela ejwayelekile ye-ISO 13406-2 maqondana namaphutha we-pixel. I-ISO 13406-2 incoma ukuthi zingaki okuzenzakalelayo ezamukelekayo ku-show ngaphambi kokuthi ifakwe esikhundleni, ngokuya ngemigomo nemibandela yewaranti. Okungezansi kuhambelana namaphaneli we-Class II LCD.
Izinga lamasu wokukhiqiza namuhla alinakuqinisekisa ukuboniswa kwesikrini okungenaphutha ngokuphelele. Amaphikseli ambalwa ahlala akhanya noma angahlukaniswa angahle abekhona.
Ithebula elingezansi libonisa inani elivumelekile lamaphikseli angasebenzi kahle amukelekile, kuya ngesinqumo sendabuko se-LCD nokuvumela amaphikseli amabili angasebenzi kahle ngamaphikseli ayisigidi.
Isixazululo soMdabu No. No. wama-pixels No. wama-Million Pixels Amaphutha Angamukeleka
Ithebula elingezansi libonisa inani elivumelekile lokungasebenzi kahle kwamaphikseli amukelekile, ngokuya ngesinqumo sendabuko se-LCD nokuvumela amaphikseli angasebenzi kahle ayi-5 wamaphikseli ayisigidi.
Ithebula elingezansi libonisa inani elivumelekile lokungasebenzi kahle kwamaphikseli amukelekile ngaphakathi kwe-5 x 5 block yamaphikseli, ngokuya ngesinqumo sendabuko nokuvumela amaphikseli angasebenzi kahle okungu-2 x block 5, amaphikiseli ayisigidi.
Izindinganiso zensiza - okufanele ukwenze
Sithembisa ukwenza lokhu:
• abe nenhlonipho, abe nemikhuba emihle futhi esebenza kahle ngaso sonke isikhathi uma sithola ukwelashwa okufanayo.
• phendula kuwo wonke ama-imeyili, izinhlamvu kanye namafeksi kungakapheli izinsuku ezi-5 zomsebenzi, noma ngokushesha ngezinto eziphuthumayo
• buyisela zonke izingcingo kungakapheli amahora angama-24, noma ngokushesha nje ngezinto eziphuthumayo
• Phendula 90% yazo zonke izingcingo ngemizuzwana engu-120
• buyisela zonke izingcingo kunoma yiziphi izinombolo zethu zosizo kungakapheli amahora angama-8 okusebenza
• thumela ukuvuma kunoma yisiphi isimangalo lapho usuku lokugcina luzokwamukelwa ngemuva kokuthola usizo
• thintana neqembu elibika isimangalo kungakapheli izinsuku ezi-5 zokusebenza ukuthi sibe nalo lonke ulwazi oludingekayo ukuhlola ikhava, siluleka ngokuthi ngabe isimangalo siyambozwa noma cha futhi yini esiyenzile ukuqhubekela phambili nodaba
• zama ukuxazulula noma yisiphi isikhalazo ekupheleni kosuku lwesithathu lomsebenzi selwamukelwe. Uma lokho kungenzeki, sizothumela ukuvunyelwa kungakapheli izinsuku ezinhlanu zomsebenzi, futhi sihlose ukukunikeza ukuphendula okusemthethweni kwesikhalazo kungakapheli amasonto amabili sibikiwe kithi. Le mpendulo izobeka nelungelo lakho lokudlulisela lolu daba phambili uma ungajabule. Imininingwane eyengeziwe ibekwe ngezansi. .
Echaza inqubo yethu yokusingathwa kwezikhalazo.
Sithembisa ukubhekana nazo zonke izikhalazo:
masinyane ngokunenhloso uzwela kahle
Sihlose ukuhlinzeka ngezinga elijwayelekile lokuhlinzekelwa kumakhasimende ethu kanye nabalingani bebhizinisi elingelesibili, kepha kwesinye isikhathi izinto zingaqhubeka ngendlela ebingahlosile. Uma kwenzeka lokhu, njengengxenye yokuzibophezela kwethu ekusebenzeni kahle kakhulu, inqubo yethu yokusingathwa kwezikhalazo yenzelwe ukuxazulula izinkinga ngokushesha nangendlela elula.
Isinyathelo 1 Lapho uqala ukubika isikhalazo, sicela unikeze i-oda lakho noma inombolo yekhasimende, ireferensi yethu, imininingwane ephelele yokungagculiseki kwakho, nokuthi yini ongathanda ukuba siyenze ukuze sixazulule lolu daba.
Esikhathini sokuqala, singakukhuthaza, nganoma iyiphi indlela elula kakhulu kuwe, ukuxhumana nomuntu ophethe lolu daba, noma uma lokhu kungafanele nganoma yisiphi isizathu, ungaxhumana noMnyango Wobudlelwano Wamakhasimende ngokuqondile, usebenzisa noma iyiphi yalezi zindlela ezilandelayo:
I-01495687587 (amahora okusebenza ngu-9 ekuseni - 5pm, uMsombuluko kuya kuLwesihlanu kungafakwa amaholide asebhange). Ngenhloso yethu yokuvikela nokuqeqeshwa, izingcingo zingarekhodwa.
I-COMWALES LTD, i-Capital tower Business Cent, i-3rd Floor, i-Capital tower, i-Greyfrairs, i-CARDIFF CF10 3AG
Ukwamukela isikhalazo sakho Uma isikhalazo sakho siqonde ngqo kungenzeka kusombulule ngokushesha okukhulu. Uma sikwazi ukuxazulula isikhalazo sakho ngaphambi kokuphela kosuku lomsebenzi wesithathu ngemuva kokuthi samukelwe yithina, sizokuthumela ngokushesha ngokuthi, 'Summary Resolution Communication', nesiqinisekiso sesinyathelo esisithathile sokuxazulula isikhalazo sakho. Kuzo zonke ezinye izimo, sizokuthumela ngokushesha incwadi ebhaliwe yesikhalazo sakho, ngokuvamile kungakapheli izinsuku ezinhlanu zomsebenzi usitholile. Uma usenzile isikhalazo sakho ngamazwi, sizokuqinisekisa ukuqonda kwethu izizathu zokungoneliseki kwakho, futhi sikucele ukuthi useluleke uma ungavumi. Ukuphenya isikhalazo sakho Isikhalazo sakho siyobe sesiphenywa yisikhulu esiphezulu seNkampani esingaqondile noma ngokungaqondile udaba lwesikhalazo. Ukuze sifinyelele esiphethweni esifanele, sizobuyekeza imininingwane etholakala kithina, ezobandakanya wonke amarekhodi kumafayili ethu kanye nombiko ovela kulungu lesikhalazo elihlobene nalo. Sizozama ukuqeda uphenyo lwethu futhi sifinyelele esiphethweni ngokushesha okukhulu. Ubude besikhathi okuzothathwa ngalo buzobhekwa ngobunzima besikhalazo kanye nobungako kophenyo oludingekayo. Ngesikhathi sephenya, singakucela imininingwane eyengeziwe ukusisiza sifinyelele esiphethweni. I-COMWALES LTD ihlose ukuhlinzeka ngempendulo ephelele kunoma yisiphi isikhalazo kungakapheli izinsuku eziyishumi nane yekhalenda lokubikwa kwalo.
Isinyathelo 2 Uma uhlala ungagculisekile ungaphishekela isikhalazo sakho ngokuqhubekayo ngesikhalazo.
Isinyathelo 3 Uma singakwazi ukuxazulula isikhalazo se-telecoms ngokweneliseka kwakho, khona-ke ungakwazi ukudlulisela lolu daba ku-Ombudsman Services. Kuthintwa ku:
Izinsiza ze-Ombudsman (Telecoms)
I-3300 Daresbury Park
Ngenye indlela, uma ungumthengi futhi isikhalazo sakho sihlobene ne-inthanethi ethengiwe kithi ngokusebenzisa izindlela ze-elekhtronikhi (isib. On-line noma nge-imeyili noma ngocingo lweselula) uzokwazi ukusebenzisa i-EC On-line Dispute Resolution (ODR) ) iplatifomu ku-http: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Izikhalazo ezifanele zifaka phakathi:
• wonke amakhasimende akho
• abathengi abathengisayo abanenzuzo yaminyaka yonke yebhizinisi kanye / noma ibhalidi lephepha elingaphansi kwe- € 2m, elinabasebenzi abangaphansi kwe-10
• izinhlangano zosizo